Industrial Magnet - Shiinaha Ningbo Sine
China Magnet warshadaha Manufacturer
The afar nooc oo magnet-joogto ah oo dhan waxaa loo isticmaali karaa sida magnet warshadaha. Wacan tahay muuqaalada kala duwan iyo waxqabadka, waxay codsatay in wax soo saarka warshadaha kala duwan. Tusaale ahaan, magnet boron birta neodymium iyo magnet ferrite waxaa inta badan loo isticmaalaa matoorrada iyo matoorrada. Heerkulka hawlgalka badnaan magnet Alnico waa ilaa 550 ~ 600 ℃, ay guud loo isticmaalo noocyada kala duwan ee alaabtii warshadaha iyo mitir. Marka la barbar dhigo magnet NdFeB, magnet SmCo waa shaqo ku habboon deegaanka heerkulka sare. Ka sokow, SmCo magnet-joogto ah waa mid aad u xoog badan in iska caabin ah daxalka iyo qayilo. Sidaa darteed iyagu waxay hubkaas ayaa loo isticmaalaa in industry qaranka difaaca, warshadaha military, qalabka microwave, shidma, marsho magnetic, processor magnetic iyo mashiinka korontada
Previous: Magnet Cow
Holder Key magnetic
qalabka xafiisyada magnetic
Daaweynta Biyaha magnetic
Ammaanka Punch Device